Sweatshirt → zvipfeko zvekusimudzira • nyanzvi P & M yakashongedzwa yemakomputa
Sweatshirts, pedyo padyo nemusuwo bhurugwa i T-shitsi, ndizvo zvekutanga zvezvipfeko zvevashandi mumaindasitiri mazhinji. Ivo zvakare mutakuri wakanakisa wekushambadza kambani, kirabhu kana chiitiko, nekuti kwete chete nekuisa mucherechedzo, asiwo nemuvara wezvokupfeka, vanogona kuve vanozivikanwa nemucheka. Sweatshirts inopa kudziya, tendera rusununguko rwekufamba zviri nani pane jekete, uye zvakare chengetedza zvakavanzika.
Sweatshirts - fashoni inoenda pamwe nekunyaradza
Mauri shopu iwe uchawana yakasarudzwa yakasarudzika yekushambadzira sweatshirts ezvakasiyana zvinangwa. Mhando dzatinopa dzinogadzirwa zvemhando yepamusoro michina inovimbisa hupenyu hwakareba hwechigadzirwa.
Kutenda kumidziyo yavo, masweatshirt anodzivirira muviri zvakanyanya mumamiriro ekunze akasiyana siyana. Mhando dzakasiyana dzemamodeli dzinovatendera kuti dzishandiswe mumwaka wese gore rese. Zvichienderana nemamiriro ekunze kana mamiriro ekushanda, iwe unogona kusarudza kubva kune inodziya, yechando uye yakatetepa shanduro zhizha, pamwe neyakavharirwa zvishoma masika uye matsutso anosvetuka.
Kunyaradza uye kushanda
Isu tinoziva zvakakwana kuti vatengi vedu vane zvakasiyana zvekutenga zvinodiwa zvinokonzerwa kwete chete kubva kumamiriro ekushanda, asiwo kubva pane zvido zvemunhu. Kuziva izvi, isu takave nechokwadi chekuti sweatshirts yakapihwa mune yedu yakasungwa yaive nezvinhu zvinodzivirira kubva kune yakasviba, kunyevera uye kudzivirira kubva kune zvinokuvadza zvemakemikari zvinhu.
Nyaradzo, pamwe chete nekushanda, zvakakoshawo. Ndokusaka mhando zhinji dzakashongedzwa nemaoko akasununguka pachiuno uye pachiuno kuti ave nechokwadi chekushisa kwazvo nekudzivirira uye kuchengetedza chipfeko chevashandi vega kubva mukukuvara kana tsvina. Mamwe emasokisi akasonera-mune zvakasarudzika zvinhu izvo zvinowedzera kusanzwisiswa kwechimiro chezvishandiso munzvimbo dzinoratidzwa zvakanyanya kukuvara nekuda kwekushandiswa kukuru (i.ebb).
Kusimudzira munhu kune mukurumbira wakakura
Makambani mazhinji anoikoshesa kuva wega uye kusarudzika, kunyanya kana vashandi vakaita nzvimbo yekumiririra mukudyidzana nevanogona kuita makondirakiti uye vatengi. Kutevera kutungamira uku, zvakakodzera kusarudza nzira yemhando yepamusoro yekumaka iyo inogona kupesana nekukuvara, abrasion uye kushambidza pakanyanya tembiricha. Naizvozvo, tinozvikurudzira kuti ive yakasimba uye yakanakisa kukwikwidzana kombiyuta yemakomputa.
Embroidery yekombuta pane zvipfeko
Imhaka yeichi chikonzero icho chipfeko chakadhindwa chinhu chakakurumbira chechipfeko chemhando dzakasiyana dzezviitiko zvekunze, mumiriri anomiririra, musangano uye kudzidziswa. Kupfeka mune mavara ekambani kana kirabhu ine kujekesa kune zvakanakira pamufananidzo wechiratidzo uye kunowedzera mukurumbira wayo.
Isu tinopa masweatshirt kubva kumakambani akadai saReis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot naAdler. Iko kutengesa kunosanganisira: dehwe, sweatshirt dzebasa, polypropylene sweatshirts, yambiro masweatshirt, majuzi.
Isu tinayo yako mukusarudzwa uye kusarudzika kwezvakagadzirwa. Isu tine epamberi yemuchina park inotipa basa rinoshanda uye yakakwira mhando kune vatengi vedu. Iyo yakazara yakazara yemhando inogona kutengwa zvese muchitoro chedu chepamhepo www.pm.com.pl kana muchitoro chedu paAllegro "PRODUCER-BHP". Kana iwe uchida kuona yedu yemuenzaniso embodema oda, ndapota shanya iyo tabu nezve firmie.
kuratidzira sweatshirtsweatshirt ne embroiderysweatshirt nemucherechedzosweatshirt nemakendurusweatshirts asina hooddzivirirosweatshirts kwevanhu vanoshandasweatshirts yebasaziya rechikorokambani sweatshirtsautumn sweatshirtszhizha sweatshirtskushambadzira sweatshirtschikepe kushambadza hoodieskushambadzira sweatshirts warawkushambadza hoodiesunisex sweatshirtssweatshi masiketihooded sweatshirtssweatshirts nemapepasweatshirts nekudhindachando sweatshirtsvakadzi sutusweatshirts evarumeyakanyanya kushambadza sweatshirtshutano nekuchengetedza nguozvipfeko zvevashandikushambadzira zvipfekoWorkwearmitambo sweatshirtsyakashambadzira kushambadzira sweatshirts
5 / 5 ( 7 mavhoti )
Chipfeko chinodzivirira (seti)
Zviratidzo uye matangi emusoro
Caps uye ngowani
Majeti / mavhinga
P & M. Kodzero dzese dzakachengetedzwa 2020
dhizaini uye kuita: pixelsperfect.pl - Poznań mawebhusaiti